बेलारूसले फसल कटाईको पहिलो परिणामहरूको योगफल दिन्छ - आलु प्रणाली
को आलु खेती र बेलारस मा कति हुन्छ?
को रूपमा रिपोर्ट गरियो सिकेका, बेलारुसमा आलुको मुख्य बाली निजी फार्मस्ट्डमा फसल गरिन्छ। कुल आलु रोपण क्षेत्रको करीव %०% जनसंख्याको बीचमा केन्द्रित छ। यो वर्ष about० लाख टन फसल उब्जाउने आशा गरिएको छ। बाँकी १.१ मिलियन टन - कृषि संगठन र फार्ममा। खैर, हालसालैका वर्षहरूमा, तिनीहरू बीच आलु उत्पादन खण्डको अनुपातमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। २०१ 80 मा फार्मको सेयर %१% थियो (२०१० मा १ 5% को तुलनामा)। कृषि संगठन र फार्ममा औसत उत्पादन साढे गुना (१ 1,1 देखि २ 2019 २ सी / हेक्टर) सम्म बढ्यो, र कुल उत्पादन%% (१.१ मिलियन टन) ले बढ्यो।
उही समयमा, विशेष कृषि संगठनहरूमा आलुको उत्पादन राष्ट्रिय औसत भन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी छ। उदाहरणको लागि, टोलोचिन क्यानरीमा यो लगभग c०० c / हेक्टरमा पुग्छ, जबकि बेलारुसको औसत औसत 500०० c / हेक्टर हुन्छ।
अक्टूबर १ Agriculture मा कृषि मन्त्रालयका अनुसार हाल आलुको फसल काट्ने काम लगभग सकियो (११% क्षेत्र बाँकी छ)। कृषि संगठनहरूले पहिले नै करीव 11०० हजार टन आलु फसल काटिसकेका छन्। यो रिटेल चेन, मेलामा निर्यात, औद्योगिककृत, स्थिरीकरण कोषमा राखिएको र विशेष भण्डारण सुविधाहरूमा बेचिन्छ।
आलुको आवश्यकताको उद्देश्यमा, तिनीहरू राज्य रजिस्टरमा समावेश गरिएको १173 प्रजातिहरू छनौट गर्दछन्। त्यहाँ विशेष प्रकारहरू छन्, उदाहरणका लागि, अर्ध-समाप्त फ्राइज, क्रिस्पी आलुहरू, सलादको लागि, स्थिर तरकारीको मिश्रणमा थप्नको लागि, सुक्खा मैश गरिएको आलु बनाउने, र खाली भण्डारणको लागि। तीन सबैभन्दा लोकप्रिय घरेलु प्रजातिहरूले ब्रीज (रोपण संरचनामा १ 16% लिन्छ), स्कार्ब (१%%) र मनिनिफेस्ट (१०%) समावेश गर्दछ। खैर, बेलारसियन चयनका प्रजातिहरू सबैभन्दा लोकप्रिय रहन्छन् - तिनीहरूले रोपण संरचनाको% 14% ओगट्छन्।
टोलोचिन क्यानरीले के उत्पादन गर्छ?
टोलोचिन क्यान्नेरी बेलारुसको सब भन्दा पुरानो उद्यम मध्ये एक हो (१ 1906 ० 2006 मा निर्माण गरिएको)। २०० Since देखि, यो आलु र बागवानी को लागी राष्ट्रीय विज्ञान एकेडेमी को वैज्ञानिक र व्यावहारिक केन्द्र को एक सदस्य छ।
उद्यमले आलु स्टार्च, जुस उत्पादन, वाइन (क्रमशः १,००० टन, million मिलियन लिटर र प्रतिवर्ष 6० हजार डेलिटरको उत्पादन) मा संलग्न रहेको छ, बढिरहेको आलु, अन्न र तिलहन, साथै बीउले औद्योगिक बगैंचा संचालन गर्दछ, रिटेल आउटलेटहरू छन् र खानपान।
बोटको खेत जग्गा क्षेत्र thousand. hect हजार हेक्टेयर - कृषि योग्य जग्गा सहित 8 हजार हेक्टरभन्दा बढी छ। 6,5० हेक्टेयरमा, गहन प्रकारको एक औद्योगिक फल र बेरी बगैंचा राखिएको छ, जहाँ स्याउ, नाशपाती, प्लम, चेरी, कालो र रातो करन्ट, चोकबेरी, गोजबेरी, रास्पबेरी र ब्लूबेरी उत्पादन गरिन्छ।
अझै, उद्यमले आलु खेतीमा ठूलो जोड दिन्छ।
२०१ 2015 मा, एक पूर्ण आलु भण्डारण परिसर यहाँ संचालनमा राखियो। स्थापित उपकरणहरूले स्वचालित पूर्व-बिक्री तयारीको लागि अनुमति दिन्छ: धुन्छ, सुक्खा, पॉलिश र क्रमबद्ध जरा बालीनाली विभिन्न आकारको जालमा भरिन्छ।
यसका लागि धन्यबाद, यस बर्षको मात्र आठ महिनामा बर्दा आलुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम 2,643२..19 मिलियन थियो, बिक्रीको नाफा १%% नाघ्यो। उत्पादनहरूको महत्त्वपूर्ण अंश रूस (मस्को र सेन्ट पीटर्सबर्ग) मा निर्यातको लागि पठाइन्छ, र २०१ 2019 देखि युक्रेनमा।
यस बर्षको अन्त्य सम्ममा, टोलोचिन क्यानरीले द्रुत फ्रिजिंग पसलको निर्माण कार्य पूरा गर्ने योजना बनाएको छ। यहाँ तिनीहरू आफ्नै कच्चा मालबाट फ्रेन्च फ्राई बनाउँदछन्, चाप्ने र पातलो-स्तर ब्रेडिंगको घरेलु नवीन प्रविधिको प्रयोग गरेर (त्यो तरल र ड्राई ब्रेडिंग) हो। लाइन क्षमता प्रति वर्ष 3,6 हजार टन छ। त्यस्ता खण्डहरुको उत्पादनले सम्पुर्ण उत्पादनहरुको व्यापारमा प्रतिस्थापन गर्न र उच्च जोडिएको मानको साथ उत्पादनहरुको निर्यात आपूर्ति विस्तार गर्न सम्भव तुल्याउँछ।
टैग: आलु प्रशोधनगणतन्त्र बेलारुसकटाई आलु
क्रास्नोयार्स्क क्षेत्रका गभर्नरले "डारी मालिनोभकी" रहेको कृषि सम्बन्धी भ्रमण गरे
रूसमा मौसमी क्षेत्रको कामको प्रगति। अक्टोबर १। को रूपमा डेटा